Onye Mmepụta mepụtara ROM maka Galaxy SII na gam akporo 11 | Gam akporosis
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10, Samsung Galaxy SII nke Samsung ka dị ndụ na ọdụ ụgbọ mmiri LineageOS 18.1 nke ahụ na-ejikwa ya eme gam akporo 11. Dị oke mma maka mkpanaka nke n'oge ya bụ tupu na mgbe maka sistemụ arụmọrụ maka ngwaọrụ mkpanaka.
N'oge ndị a ugbu a ebe teknụzụ enweela ọganihu ọbụna nwee ike ịpịpịa ákwà ma ọ bụ mpịakọta dị ka LG RollableMaka ndị nwere Galaxy SII na drawer, ikekwe ọ bụ oge iji gafee ROM a iji weta ya na ndụ.
El ọdụ ụgbọ mmiri sitere na ndị mmepe dị iche iche na ndị XDA mmepe maka ụdị GT-I9100. N'ime ihe ndị na-arụ ọrụ, anyị nwere ike ịchọta ihuenyo, Wi-Fi, igwefoto, na igwe okwu, yabụ maka ụfọdụ ihe ọ ga-arụ ọrụ zuru oke.
Ee ọ bụ eziokwu na enweghị ike ịkpọ oku, agbanyeghị na enwere ike ịnata ha. Maka ugbu a, anyị nwere ike ichefu GPS, redio FM, nyocha ihuenyo na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ. Yabụ ọ bụrụ na ị bu n'obi ịwụnye ROM a, nwee nkwado nke ngwa ngwa ugbu a ị nwere na Galaxy SII dị njikere.
Maka nwụnye anyị ga-eji Odin mee ihe ekele ịbụ ROM jikọtara ya na Usoro Mgbake Dịpụrụ iche ma ọ bụ IsoRec. Dị ka nkọwa ị ga-echebara mgbe ị na-egbukepụ ROM ahụ, kwuo na ị ga-ege ntị nke ọma na mpaghara nchekwa data, ebe ọ bụ na ị ga-ahapụrịrị nkebi ma hichapụ ma ọ bụ hichapụ nchekwa nke Galaxy SII.
Karịa ọchịchọ ịmata ihe inwe ike ichoro gam akporo 11 na Galaxy SII ọ ga - ekwe omume na izu ma ọ bụ ọnwa na - abịanụ, ROM ga - emelite iji megharịa ụfọdụ ihe ndị na - adịghị.
Ntuziaka na ibudata - LineAge OS 18.1 maka Galaxy SII
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Ndụ na ịgba egwu: Galaxy SII na-anata ọdụ ụgbọ mmiri nke LineageOS 18.1 na gam akporo 11